अपाङ्गता राजुलाई धन भएका मनको खाँचो
मुसहर समुदायका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क पढाउने मात्र गर्दैनन् उनी, पैसा जुटाएर कापी कलम बाँड्छन्
धन हुनेको मन हुँदैन मन हुनेको धन ……
चर्चित यो गीतको बोल यर्थाथमा परिणत भएको छ दुबै खुट्टा नचल्ने विराटनगर १६ रानीका ४० वर्षे राजु क्षेत्रीको जीवनमा । आफैं ट्राइसाइकलमा कुदाएर हिँडडुल गर्नुपर्ने बाध्यता भएका निर्धन सुकुम्बासी परिवारका राजुले पाँच वर्षदेखि निःशुल्क सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मुसहर समुदायका बालबालिकाहरुलाई पढाइरहेका छन् ।
उनी घरभन्दा झण्डै तीन किलोमिटर दक्षिण ट्राइसाइकल कुदाएर नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको मुसहरी बस्तीमा हरेक दिन बिहान पुग्छन् र झण्डै ४० देखि ५० जना बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क पढाउँछन् । राजु निःशुल्क मुसहर समुदायका दलित बालबालिकाहरुलाई पढाउने मात्र गर्दैनन्, पैसा जुठाएर कापी कलम दिने र बेलाबेला खाजा र चकलेटहरु बाँड्ने काम पनि गर्छन् । विद्यालय नजाने सुकुम्बासी निर्धन निरक्षर मुसहर बालबालिकाहरु पढाउन थालेपछि आजकल मुसहरी बस्तीका बालबालिकाहरु बिद्यालय जान थालेको स्थानीयबासी जलसीदेवी ऋषिदेव बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘राजुसर आएर निशूल्क पढाउन थालेपछि हाम्रा केटाकेटीहरु धेरै सुध्रिएका छन्, नभए खेलेरै दिन बिताउँथे आजकल पढन थालेका छन् ।’
राजुका बुबा कृष्णबहादुर बोगटी पहिले विराटनगर जुटमिलमा मजदुरी गर्थे । वर्षौपहिले मिल बन्द भएकोले उनी बेरोजगार छन् । उनका दुई छोरी र एक छोरा छन् । दुबै छोरीहरु बिहे गरेर घर गैसकेका छन् । बुढी आमा घरमै बसेर दिन विताउन बाध्यछिन् । अहिले दुवै खुट्टा अपांगता भएका र शरीर पनि सुक्दै गएका राजुले नै कमाएर आमाबाबु पाल्दै आएका छन । केही वर्ष मात्र भयो कसैको दयाभावले राजु विराटनगर आँखा अस्पतालमा चश्मा विभागमा काम गर्न थालेका छन् । त्यहाँबाट उनले मासिक १४ हजार तलब पाउँछन् । त्यही तलबले उनीहरुको घरबार दुखले चल्नेगर्छ । विराटनगर १६ रानीमा प्रहरी तालिम केन्द्र पछाडिको सुकुम्बासी बस्तीमा उनीहरुको सानो घर छ । मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले उनका बाबुले जेनतेन घर जोडेका हुन् । अलिअलि बचाएको पैसा राजुको उपचारमा नै खर्च भएपछि उनीहरु झन् गरीब भए ।
बिएड तेस्रो वर्षसम्म पढेका राजु पहिले सपाङ्ग थिए । अरु जस्तै मज्जाले खेल्थे कुद्थे र पढन जान्थे । कक्षा ५ मा पढ्दा एक दिन साइकल पल्टिदा उनी नालामा लडे । त्यसपछि उनको खुटा फुल्न थाल्यो । बाबुआमाले बैद्यकोमा लगेर बैधले दुई महिना राखेर तेलमालिस गरेर तर निको भएन बरु विमार झन् बढयो । त्यसपछि ऋण खोजेर बाबुआमालाई उनलाई उपचारका लागि काठमाण्डौ टिचिङ अस्पताल ल्याए । त्यहाँ डाक्टहरुले राजुको नशामा चोट लागेकोले उनी निको हुन नसक्ने जानकारी गराए । अहिले पनि राजुको जीउ खुम्चदै र सुक्दै गएको छ । राजुका बाबाले भने अनुसार ‘स्पाइनल इन्जुरी’ की के भएको अरे राजुलाई ।
अपांङग भएपनि राजुले हरेस खाएनन् । निरन्तर हुब्लिचेयरमा बसेर बिद्यालय गए । एसएलसी पास गरे । त्यसपछि काठमाण्डौ बाह्र कक्षा उत्तिर्ण गरे । अनि पशुपति क्याम्पसमा भर्ना भए । विएडको पहिलो र दोस्रो वर्ष उत्तीर्ण गरे तर तेस्रो बर्षको परीक्षा दिन पाएनन् । उनको पढाई अधुरै रह्यो ।
गरिब र अपाङ्ग भएपनि समाज सेवा गर्ने चाहना राजुको थियो । उनी केही गरेर देखाउन चाहन्थे । एकपल्ट चुनावमा उनले नेताहरुसँग भोटमाग्दै हिडने अवसर पाए । त्यही क्रममा उनले वर्षामा सधै डुवानमा पर्ने र हरेक वर्ष विस्थापित हुन बाध्य सिमी क्षेत्रको मुसहरु बस्ती देखे । सोधपुछ गर्दा त्यहाँ बिद्यालय जाने एक जना पनि थिएनन् । यसैले उनले निशूल्क उनीहरुलाई पढाएर सहयोग गर्ने निधो गरेर । करिब ५० घरपरिवार बसोबास गर्ने उक्त बस्तीका अभिभावकहरु पनि छोराछोरी निशूल्क पढाइदिन्छ भन्दा औधि खुसी भए । त्यसपछि राजुले बोरा ओछ्याएर मुसहर बालबालिकाहरु पढाउन थाले ।
नातामा राजुका मामा पर्छन् हास्य कलाकार पारस थापा । राजुको सेवा कर्म देखेर उनी गदगद भए । त्यसपछि उनले पनि राजुलाई मुसहर बस्तीसम्म ल्याउने लाने गरेर सहयोग गरिदिन थाले । बिस्तारै राजुको निस्वार्थ शिक्षा सेबाबारे मानिसहरुले थाहा पाए । त्यसपछि लायन्स क्लब पाथिभराले एक कोठे भवन बनाइदियो । भवन बनेपछि खुल्ला आकाशमुनी चिसो भुँईमा बसेर पढ्दै आएका बालवालिकाहरु कोठाभित्र बसेर पढन थाले । अष्ट्रेलियामा रहेका नविन रम्तेल नामका एक जना सहयोगीले पानी खाने कल गाडिदिए । कसैले शौचालय बनाइदिए । यसैपाली मात्र हो वडा कार्यालयले बाल केन्द्रसम्म जाने कच्चीबाटो बाटो बनाइदिएको छ । त्यो भन्दा पहिले बाटोमै ट्राइसाइसाइकल छाडेर उनी मामा पारसको काँधमा बसेर बालकेन्द्रसम्म आउँथे पढाउन ।
सबैभन्दा गरिब र भूमिहीन समुदायका मुसहर बालबालिकाहरुलाई पढाउन अहिले राजुकी सपाङग धर्मपत्नी संगीता गजुरेल क्षेत्रीले पनि सहयोग गर्न थालेकी छन् । तीन बर्ष अघि नुवाकोटकी सपांङग २५ वर्षे युवती संगिताले राजिखुसी विवाह गरेकी हुन् दुबै खुट्टा नचल्ने अपांङ्ग राजुसँग । श्रीमतीको सहयोग पाएपछि आजकल राजु समयमै अस्पताल काममा जान्छन् । सँगिता दिउँसो गएर बालवालिकाहरुलाई निशूल्क पढाउँछिन् । बिदाको समयमा सँधै र अन्यदिन आलोपालो मिलाएर राजुपनि बालकेन्द्रको हेरविचार र पढाउने काममा खटिन्छन् ।
राजुले पढाउन थालेको बालकेन्द्रमा लायन्स पाथिभराले थप एक कोठा भवन थपिंदैछ । तर कोठा थपिएपनि बालकेन्द्रको अवस्था भने बिजोग छ । पढ्न बालबालिकाहरुलाई पोशाक र खाजाको व्यवास्था छैन । प्रायः नाङ्गै र धुलैमैलै पढ्न आउँछन् । अनि बालकेन्द्रभित्र न त किताब कर्नर छ न त सुकिलो म्याट र कार्पेट नै । बालबालिकाहरुले नियमित कापी किताब पनि पाउदैनन् । धरैले मौखिक पढ्ने गर्छन् । बालकेन्द्र वरिपरिको वतावरण पनि अझै पूर्ण सरसफाइयुक्त्त हुन सकेको छैन ।
धन नभएपछि सेवाको हर्षित मन भएका अपांङग राजुको एउटै चाहना छ आफुले स्थापना गरेको बालकेन्द्रलाई सरकारले संरक्षण गरेर बालमैत्री बनाइदेओस् । किनभने कलिलो उमेरमै विहे गर्ने मुसहर बस्तीमा जन्मने वालबालिकाहरु शिक्षाको उज्यालोबाट सँधैभरी बञ्चित भैरहन नपरोस् । गरिब दलित बालबालिकाहरुले सुकिला लुगा र खाजा पाउन । अहो कस्तो असल विचार ! धन नभएपनि मन भएका राजुको सपनालाई हामी धन भएका मनहरुले सहयोग किन नगर्ने ?
सोमबार, २३ चैत, २०७७, बिहानको १०:१४ बजे